MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA EE NEWFOUNDLAND IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha ee Newfoundland iyo Sawirro
Newfoundlands Satchel (cagaha cagaha) ugu yaraan laba sano jir iyo Jack oo 6 sano jir ah, waxaa soo saaray Karazan Newfoundland Kennels
Liistada eeyaha cusub ee New Mixland Mix
Sanadihii la soo dhaafay waxaan ka helnay waraaqo dadka noo sheegaya sida loogu dhawaaqo magaca noocan. Waraaqaha ayaa is burinaya. Qof kastaa wuxuu umuuqdaa inuu leeyahay fikirkiisa gaarka ah habka saxda ah ee loogu dhawaaqi karo magacan. Hoos waxaa ku yaal kala duwanaansho iyo faallooyin aan helnay.
Dhul cusub-baashaal / Newf-in-land
'Ku dhawaaqida aad u bixiso nooca eeyaha Newfoundland waa khalad. Waa eeyaha 'New-fun-land'. Waa isha ay ka helaan qaar ka mid ah hiwaayadda 'dadka cusub ee' Newfunlanders 'inay maqlaan kala duwanaanshaha sida kan aad soo jeedinayso.'
isku darka heeler jarmalka
'Boggaaga ku saabsan eeyaha Newfoundland waxaad ku dartay ku dhawaaqid qaldan oo ah Newfoundland. Qaybta erayga loo higgaadiyay ‘la helay’ waxaa loogu dhawaaqaa sida ay u qoran tahay, ee maahan FANNAAN. '
'Marka laga hadlayo macluumaadkaaga ku saabsan Newfoundland ku dhawaaqida saxda ah ee magaca waa' Newf-in-land '. Markii si sax ah loo dhaho waxay ku dhawaaqi doontaa FAHAN. Marar badan, marar badan ayaan maqalnaa magaca gobolkeenna, eeygii quruxda badnaana si khaldan ayaa loogu dhawaaqay. Waxay noqoneysaa mid xanaaq badan, gaar ahaan marka ay maamusho dadka sheegta inay wax ka ogaadaan eeygayaga cajiibka ah iyo / ama dadka. Fadlan, maahan 'Newfinnlund' ama Newfundlind ama Newfoundlind. '
'Aniga dhalasho ahaan ka soo jeeda' Newfoundland iyo Labrador 'fadlan ogow in aan 100% ku qanacsanahay in ku dhawaaqidaada jiilka Newfoundland iyo magaca gobolkayagu uu qaldan yahay. Fadlan HA u soo jeedin dadku inay ugu dhawaaqaan dhulka Newfoundland inuu yahay Newf-in-land. Waxaa loogu hadlaa sida loo higgaadiyay. Hadday waxtar leedahay: Dhul cusub. '
Newfoundland waa eey xoog badan, oo baaxad weyn. Madaxa waa ballaaran yahay waana culus yahay taaj yar oo qalooca. Qoorta iyo dhabarku waa xoog badan yihiin. Afka ballaadhkiisu waa ballaadhan yahay sida uu u qoto dheer yahay, oo waa gaaban yahay. Joogsigu waa dhexdhexaad. Sanka guud ahaan waa madow yahay marka laga reebo eeyaha midabka maar leh, oo leh sanka bunni. Ilkaha waxay ku kulmaan heer ama qaniinyada maqasku. Indhaha qoto-dheer, indhaha madow ee mugdiga ahi way yara yar yihiin oo way kala fogyihiin. Dhegaha saddex geesoodka leh waxay leeyihiin talooyin wareegsan waana yar yar yihiin. Lugaha si fiican ayey u muruqsan yihiin, toosan yihiin oo is barbar socdaan. Cagaha bisadda u eg ayaa websaydha ah. Dhawaaqa waa la saari karaa. Dabo ayaa sal adag oo ballaadhan salka, hoos u laalaada. Dharka laba-geesoodka ah waa mid fidsan oo biyo u adkaysta. Jaakada dufanka leh ee saliida leh waa mid qafiif ah oo dhex dhexaad ah, ha noqoto mid toosan ama waatiirsan Koodhka hoose waa saliid, cufan oo jilicsan. Eeyaha ku nool gudaha ayaa u muuqda inay lumiyaan jaakadooda. Midabada jaakada waxaa ka mid ah madow (ugu caansan), madow leh buluugyo buluug ah, madow calaamado cad leh, bunni, cawl, iyo cadaan leh calaamado madow oo loo yaqaan a Landseer . Xusuusin: Maraykanka iyo Ingiriiska Landseer-ka waxaa loo arkaa inay yihiin isku nooc sida Newfoundland, hase yeeshee waddamada Yurub qaarkood Landseer waa nooc gebi ahaanba ka duwan kan Newfoundland. Dhulbixiyeyaasha Yurub waxay leeyihiin lugo ka dheer kuwa Newfies Landseers ma ahan kuwa aad u ballaaran, waa eeyo isboorti badan. Riwaayadaha, si gooni ah ayey u tartamaan.
Newfoundland waa eey leh dabeecad wanaagsan, dabeecad macaan, geesi, deeqsi, nabad iyo waxgarad. Ey deggan, dulqaad badan oo martida ku jilicsan oo adeeca sayidkiisa. Waa dad aad u daacad ah, daacad ah oo la aamini karo. Jidhkiisa weyn wuxuu u muuqdaa inuu si tartiib tartiib ah u socdo. Marar dhif ah ayay ciyi, laakiin waa difaac iyo geesinimo markay u baahdaan. Markii ku soo xadgudbay la qabtay waxay u badan tahay inay ku hayaan gacantooda, iyagoo ku xiraya koonaha ama dhex dhigaya tuugga iyo qoyska halkii ay ka noqon lahaayeen weerar gebi ahaanba ah. Way caqli badan yihiin oo ay ku ogaan karaan cidda halista ugu jirta xirmada iyo kuwa aan ahayn. Aad u deggan oo jilicsan. Ey kasta, xayawaan kale, cunug, ama booqde kasta oo leh ujeed xumo maleh heli doona soo dhaweyn saaxiibtinimo. Newfoundland sida caadiga ah waxay la jaanqaadaysaa eeyo kale, laakiin waa inay ahaataa si wanaagsan ula dhaqan bulshada iyaga, iyaga oo siinaya sixitaan calaamad kasta oo dagaal-gal ah si loo caymiyo dhaqankan. Guud ahaan wanaagsan leh xoolaha kale . Dulqaad, ciyaar iyo jacayl leh carruurta. Wuxuu ku raaxeystaa banaanka, laakiin sidoo kale wuxuu ubaahan yahay inuu la joogo qoyskooda. Newfoundland waxay u egtahay inay noqoto mid aad u qasan marka la cabo biyaha waxayna badanaa cabaan wax badan. Way sameeyaan duurxul , gaar ahaan ka dib markaad cabtay, laakiin guud ahaan kama mid aha kuwa ugu xun dembiilayaasha marka loo eego kuwa kale noocyada waaweyn . Waxay jecel yihiin dabaasha, waxayna ku jiifsan doonaan biyaha haddii ay fursad helaan. Noocan ayaa noqon kara wax yar adag tahay in la tababaro . Tababbarka waa in loogu qabtaa si deggan oo miisaaman. Si loo gaaro a ey fiican isu dheeli tiran mid waa inuu ahaadaa mid deggan, laakiin adag, kalsooni leh oo la socda eeyga. Sii eeyga xeerarka waa inuu raac oo ku dheji iyaga, oo ay weheliso socod socod maalinle ah oo eeygu cirib ku dhigto dhinac ama gadaashaada. Ma jiidayo horay. Bar eyga inuu galo oo ka baxo albaabka iyo irdaha laga galo qofka bini'aadamka. Eeyadan ayaa aad ugu nugul dhawaqa codkaaga. Tixgeli tan inta lagu jiro tababarka qofku wuxuu u baahan yahay inuu xasilloonaado, laakiin adkeysto. Dadka qaangaarka ah ee Newfoundlands waxay wax cunaan oo keliya sida ugu badan ee loo yaqaan 'Labrador', laakiin eeyo yaryar ayaa wax badan cuna.
Dhererka: Ragga 27 - 29 inji (69 - 74 cm) Dumarka 25 - 27 inji (63 - 69 cm)
Miisaanka: Ragga 130 - 150 rodol (59 - 68 kg) Dumarka 100 - 120 rodol (45 - 54 kg)
U nuglaanshaha cudurada wadnaha ee la iska dhaxlo ee loo yaqaan 'sub-aortic stenosis' (SAS) iyo sinta dysplasia. Ka taxaddar in Newfoundland aysan dufan yeelan.
Wax caadi ah kuma sameyn doono guri dabaq ah haddii jimicsi ku filan la sameeyo. Iyagu gudaha waxoogaa kama hawl galaan oo daarad yar ayaa ku filan. Kuwa cusubi waxay doorbidaan cimilo qabow oo kumaleylka kuleylka. Hubso in had iyo jeer ay jiraan biyo qabow iyo meel hadh leh oo ay jiifsadaan.
Rafaahan jilicsan ayaa ku qanacsan inuu ku seexdo guriga, laakiin wali wuxuu u baahan yahay in lagu qaado a socod maalinle ah . Inta lagu jiro socodka eeyga waa in loo sameeyaa ciribta dhinaceeda ama gadaashiisa qofka haya hogaanka, sida maskaxda eeyga maskaxdiisa hogaamiyaha ayaa hogaaminaya wadada, hogaamiyahaasina wuxuu ubaahan yahay inuu noqdo aadanaha. Waxay ku raaxeysan doontaa fursado badan oo dabbaal iyo xiiran.
9 - 15 sano, isku celcelis 10
Waxay si aad ah uga duwan tahay 2 ilaa 15 eeyo yaryar, celcelis ahaan qiyaastii 8 ilaa 10 arday
Caddaynta maalin kasta illaa toddobaadle ah ee qaro weyn, jilicsan, jaakad laba jibbaaran oo burush adag ayaa muhiim ah. Koodhka hoose waxaa la daadiyaa laba jeer sanadkii gu'ga iyo deyrta waxaana loo baahan yahay taxaddar dheeraad ah xilliyadaas. (Muddada daadinta ugu culus waxay timaaddaa guga). Iska ilaali maydhashada haddii aan loo baahnayn, maxaa yeelay taasi waxay kaa fogeysaa saliidaha dabiiciga ah ee jaakadda Bedelkeeda, shaambo qalalan waqti ka waqti.
Newfoundland waxay noqon kartaa farac ka mid ah Viking 'eeyaha orso' ama eeyaha reer guuraaga ah ee reer guuraaga ah. Qaar kale waxay aaminsan yihiin in Newfoundland ay qaraabo dhow yihiin Labrador. Aragtidani waxay ku saleysan tahay isu ekaanshaha labada taranka iyo xaqiiqda ah in xeebta Newfoundland iyo Labrador ay aad isugu dhow yihiin. Waxaa suurtagal ah in Labrador, oo ah dabaasha ugu fiican, uu awood u yeeshay inuu dabaasho Marinka Belle Isle ama inuu lug ku tallaabo markii biyaha la qaboojiyey. Kuwo badan ayaa rumeysan in Newfoundland ay asal ahaan ka soo jeedo iskutallaabooyinka u dhexeeya Tibetan Mastiffs oo ay keeneen Kanada kalluumeysato Ingiriis ah ama reer Yurub ah iyo eeyaha maxalliga ah horraantii 1700naadkii. Sikastaba xaalku ha ahaadee, noocii ka dhashay ayaa helay kaluumeysi caawiye kaluumeysi ah meel ka baxsan xeebta Newfoundland, Canada.
Qaar kale waxay yiraahdaan eeyga Newfoundland wuxuu xiriir la leeyahay Labrador, si kastaba ha ahaatee maaha sida kor lagu sheegay .... Noocani wuxuu horeyba ugu jiray St John ee Newfoundland 500-sano ka hor markii Cabot yimid, tan waxaa laga ogyahay akoonnada qoran ee booqdayaasha kaliya dhawr sano ka dib markii uu degay. Vikings, oo halkan joogay 500 sano kahor ama koox kale ayaa laga yaabaa inay keeneen xayawaanka xeebahan. Eyga Labrador wuxuu ka soo jeedaa eey la yiraahdo Eyga Biyaha ee John iyo xulashada xulashada ee Newfoundland. Maalmihii ugu horreeyay ee noocani, ka hor intaan loogu yeedhin Sheybaarada waxaa loo yaqaanay 'eeyga yar ee Newfoundland.' Magaca Labrador waxaa loo bixiyey iyaga ka dib markay bilaabeen inay caan ku noqdaan astaamahooda wanaagsan.
Rug-yarahan dabacsan ayaa loo adeegsaday soo jiidashada shabagyada, qaadista khadadka doomaha ee xeebta, dib u soo celinta wax kasta oo badda ku dhacay iyo badbaadinta dhibbanayaal iyo doonnidii ku degtay. Noocyada ayaa sidoo kale loo isticmaalay in lagu soo jiido alwaaxa, jiidaan meelihii waraaqaha la geeyay, caano la geeyo oo xamuul lagu qaado baakado. Newfoundland waxay ahayd, welina tahay, eey badbaadiya eey dabiici ah oo dabiici ah. Qaar badan ayaa noloshooda ku leh xubnaha jiilalka. Sannadkii 1919 billad dahab ah ayaa la siiyay Newfoundland oo badbaadinta u jiiday doon badbaadin ah oo ay ku jiraan labaatan qof oo markabku burburay. Waxaa loogu magac daray St. Bernard ee biyaha. Intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka, Newfoundlands waxay sahay iyo saanadba u soo jiiday ciidamada qalabka sida ee xaaladaha dabeylaha ee Alaska iyo Aleutian Islands. Maanta, maraakiibta nabdoon iyo isgaarsiinta hagaagsan ayaa xaddiday hawlihii hawgalka eeyga laakiin rafcaankiisu kama yarayn sababo la xiriira xaqiiqda ah in loo arko wehel qurxoon, daacad ah, wehel farxad leh Wali aad ayey ugufiican tahay tijaabooyinka biyaha, u hogaansamida tartanka, miisaanka jiida, gawaarida, boorsada, iyo sida eyga iyo ilaaliyaha eyga. Naadiga Newfoundland ee Mareykanka wuxuu qabtaa tijaabooyin diyaarinta iyo samatabbixin biyo ah.
Mastiff, AKC Shaqaynta
ACA = Ururka Canine American Association Inc.
NCA = Naadiga Newfoundland ee Ameerika
Harvey eeyaha yar ee Newfoundland ee jira 2 ½ bilood jir
Ey weyn oo reer Newfoundland ah - Sawir waxaa iska leh David Hancock
Karazan Satchel, oo uu soo saaray Karazan Newfoundland Kennels
Mulligan midabka shukulaatada dhifka ah ee Newfoundland jira 9 sano
Lucy the Newfoundland sida eey yar oo jirta 3 bilood
Kuuba waa midab shukulaatada dhif ah Newfie
Newfoundlands Brody iyo Hanna — Brody ayaa halkaan lagu muujiyay iyaga oo 2 sano jira iyo taageere Minnesota Vikings ah. Hanna waa cunug yar oo jira 5 bilood.
Andrew the Newfie, oo uu cunay Karazan Newfoundland Kennels
'Kani waa Eygeena cusub ee' Newfoundland 'ee Stella oo jirta 3 bilood. Iyadu waa eey aad u faraxsan, oo jecel biyaha. '
Wallace eeyaha yar yar ee Newfoundland
Eeg tusaalooyin dheeraad ah oo ku saabsan Newfoundland
Newfoundland Sawirada 1
Newfoundland Sawirada 2
Newfoundland Sawirada 3
Eeyaha Afafka Madoow ah
st Bernard muqisho adhijir Jarmal
Jack Terrier iyo chihuahua isku dhafan
soohdinteeda Pit cross Russell Jack
buuraha bernese eey stern bernard mix puppy
Soshiyaaldimoqoraadiga Pei beagle isku darka eey yar
Cocker spaniel isku darka sarkaal oo dahab ah